Dowladda dhexe oo guryo u samaynaysa danyarta degan guryihii dowladda ee Muqdisho (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 23, 2013 5:10 b 0
Muqdisho, August 23, 2013 – Wasaarada warfaafinta, Isgaarsiinta iyo boostada ayaa shaacisey in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaarinayso qorshe dib u dejin loogu samaynayo dadka danyarta ah ee qeybtood ku jiraan guryihii dowladda hore.
Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi wasiirka warfaafinta ayaa arintaas ka sheegay shirkii jaraa?id ee kulankii golaha wasiirada ee shalayto, wuxuuna sheegay in dowladdu ay masuul ka tahay shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirku wuxuu sheegay in ay qaadi doonaan talaabooyin dhowr ah oo dadka Soomaaliyeed lagu gaarsiinayo adeegyo waa weyn oo ay qeyb ka yihiin in dadka laga raro guryaha dowladda, lana dejiyo meelaha loogu talo-galay.
Xukuumada federaalka ah ee Soomaaliya waxay la kaashan doontaa qorshan hay?adaha samafalka sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalka, waxaa kaloo haatan lagu raad-joogaa dhulkii dadkaasi guryaha looga dhisi lahaa.
Wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya waxay xustay in ay jiraan dad danyar ah oo degan guryaha dowladda oo ay dad kale kiro uga qaataan guryahaas, taas uu wasiirku ku tilmaamay nasiib xumo talaabo muuqata laga qaadi doono.
Dhegeyso hadalka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmooge Xirsi.